कक्षा १२ को नतिजा: मध्यमस्तरको जीपीए ल्याउने धेरै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सुध्रिएन नतिजा, धेरै विद्यार्थी अंग्रेजीमा कमजोर
श्रावण १८, २०७५ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — कक्षा १२ को परीक्षामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीले मध्यमस्तरको जीपीए प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार पहिलोपटक ग्रेडिङ प्रणाली (अक्षरांकन पद्धति) अनुसार सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजामा मध्यमस्तरको जीपीए २.०१ देखि २.४० ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या ९० हजार २ सय ९९ छ ।
यो जीपीए ४० देखि ४९ अंक प्राप्त गर्नेको हो ।
गत वैशाख १४ देखि २७ सम्म सञ्चालित परीक्षामा कुल ४ लाख १७ हजार ८९ परीक्षार्थी सम्मिलित थिए । नियमित २ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ जना सहभागी थिए, जसमध्ये ३.६१ देखि ४.० जीपीए प्राप्त गर्नेको संख्या १ हजार १ सय ६९ छ । ३.२१ देखि ३.६० जीपीए प्राप्त गर्ने ११ हजार २ सय २१ जना रहेको बोर्डले जनाएको छ । २७ हजार ६ सय ४३ जनाले २.८१ देखि ३.२० जीपीए ल्याएका छन् । ५८ हजार ३ सय ४५ विद्यार्थीले २.४१ देखि २.८० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । १.६१ देखि २.०० जीपीए ल्याउने परीक्षार्थी २२ हजार ७ सय ३४ जना छन् ।
४ हजार ४ सय ८७ जनाले ०.८१ देखि १.२० जीपीए प्राप्त गरेका छन् । सबभन्दा थोरै १ सय ९९ जनाले ०.०० देखि ०.८० जीपीए ल्याएका छन् । ९ वटा जीपीए रेन्जमा नतिजा प्रकाशन गरिएको हो । नियमिततर्फ १७ हजार ४० विद्यार्थी विभिन्न कारण परीक्षामा अनुपस्थित देखिएकाले कुल जीपीएमा नतिजा प्रकाशन गरिएको छैन ।
आंशिकतर्फ ३५ दशमलव २ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षामा सहभागी १ लाख १७ हजार ४ सय १४ मध्ये ४१ हजार ३ सय २५ उत्तीर्ण भएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । परीक्षा सकिएको ८१ औं दिनमा नतिजा सार्वजनिक भएको हो । यो वर्ष पहिलोपटक कक्षा १२ का सबै समूहको नतिजा एकैपटक प्रकाशित गरिएको हो । ‘आंशिकतर्फ गत वर्षको भन्दा नतिजामा सुधार भएको छैन,’ बोर्डकी प्रवक्ता जयन्ती सत्यालले भनिन्, ‘अंकलाई अक्षरमा रूपान्तरण गरेर ग्रेडिङ पद्धतिमा नतिजा प्रकाशन गरेका हौं ।’
नतिजाअनुसार अनिवार्य अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थी कमजोर देखिएका छन् । २ लाख ९८ हजार ९ सय २९ जनाले अंग्रेजीको परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये एक सय ७० जनाले मात्रै ए प्लस प्राप्त गरेका छन् । अंग्रेजीमा पनि मध्यस्तरको ग्रेड प्वाइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी ४८ हजार एक सय छ । अंग्रेजी विषयमा मात्र डी प्लसभन्दा थोरै ग्रेड प्राप्त गर्ने एक लाख ४५ हजार परीक्षार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । एउटा विषयमा डी प्लस वा त्योभन्दा कम ग्रेड आएमा विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउँछन् । उक्त परीक्षा भदौ १६ मा हुने जानकारी बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले दिए । पुनर्योगका लागि भदौ १ भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
राष्ट्रले नहेरे पनि खेलाडीले सम्मान गरिरहेकामा खुसी छु
श्रावण १८, २०७५ एलपी देवकोटा
जुम्ला — देशका लागि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय पदक भित्र्याएका धावक हरिबहादुर रोकाया अहिले अस्पतालको शय्यामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय धावक एवं प्रशिक्षक रोकाया असार ६ गते प्रशिक्षण दिँदादिँदै एक्कासि हातखुट्टा नचलेर ढलेका थिए । उनको राजधानीस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
‘देश चिनाउन खेल खेलियो तर देशले मलाई चिनेन,’ उनी अस्पतालको शय्याबाट गुनासो गरिरहेका छन्, ‘नेता बिरामी भएको भए विदेशमा उपचार हुन्थ्यो होला तर मलाई संघीय सरकारले वास्ता गरेन ।’
रोकाया एथलेटिक्समा वल्र्ड रेकर्ड कायम गरी गिनिज बुकमा समेत नाम लेखाउन सफल खेलाडी हुन् । उनलाई भेट्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टबाहेक कुनै सरकारी अधिकारी पुगेका छैनन् । वर्षौंदेखि कर्णालीमा खेलाडी उत्पादन गरे पनि आफूलाई बेवास्ता गरिएको उनको गुनासो छ । उनको उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक लाख र चन्दननाथ नगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
रोकायाले कर्णालीका खेलाडीलाई सन्तुलित भोजन नपुग्ने भएकाले अभ्यासमा समस्या भएको बताए । उनको पनि खानपानमा सन्तुलन नमिल्दा समस्या भएको चिकित्सकले बाएका छन् । ‘खेलाडीले चिया र दुनोट खाएर दौडिनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘खेलाडीको पोषणका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन ।’ राष्ट्रले सम्मान नगरे पनि खेलाडीले सम्मान गरिरहेकामा खुसी लागेको रोकायाले बताए । प्रशिक्षण दिँदादिँदै बिरामी परेकाले रोकायाको स्नायु प्रणालीमा कमजोरी देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । ‘उहाँको खानपानको सन्तुलन नमिल्दा रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर बनेपछि स्नायु प्रणालीमा समस्या आएको हो,’ डा. नवीन थापाले भने, ‘निमोनियाँ र डायरिया भएको खण्डमा नसा हानेर समस्या हुन्छ ।’ डा. थापाका अनुसार नसामा कीटाणुले संक्रमण गरेकाले फिजियोथेरापी भइरहेको छ । रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन औषधि प्रयोग भइरहेको उनले बताए ।
धावक रोकायालाई सहानुभूतिबाहेक केही दिन नसकेको प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले बताए । ‘जुम्लाजस्तो विकट ठाउँमा जन्मेर नेपाललाई नै विश्वसामु चिनाए तर कर्णालीको भनेर सरकारले बेवास्ता गर्‍यो,’ उनले भने । उनले रोकायाको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बन्न संसद्बाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । रोकायाले जुम्लाको सिमाचौरमा दुई दर्जन बढी खेलाडीलाई एथलेटिक्स प्रशिक्षण दिँदै आएका थिए । धावक रोकायाले उत्पादन गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी खेलाडीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलमा भाग लिइसकेका छन् । रोकाया बिरामी परेपछि आफूहरूले अभ्यास गर्न नसकेको खेलाडी मधु न्यौपानेले बताए ।